Otu esi emepụta multiboot pendrive: nzọụkwụ site nzọụkwụ | Site na Linux
Obere igwe na-enye ohere na a dị ndụ USB nwere dị iche iche Linux nkesa ọ dịghị mkpa ịwụnye ihe ọ bụla na PC. Nke a pụtara na ị nwere ike iwunye ọtụtụ nsụgharị nke Linux dịka ohere dị na pendrive na ị ga-enwe ike họrọ na nke na-amalite usoro si ihe osise menu nke Agba 2.
Iji wụnye usoro ihe omume, dị nnọọ soro ntuziaka na ya na peeji nke (http://liveusb.info), ma ọ bụrụ na ị nwere Ubuntu ị nwere ike ibudata edemede nwụnye ozugbo:
M unzipped faịlụ ebudatara:
taa -xvf wụnye-depot-multisystem.sh.tar.bz2
Gbaa faịlụ nwụnye:
Ndị nwere nsogbu ndị ọzọ nwere ike ịgbaso akwụkwọ ntuziaka ndị a.
Ihe onye a na-eme bụ ịgbakwunye nchekwa nke ngwa ahụ ma wụnye ndị ịdabere na ya niile, n'etiti ha, wụnye igwe arụmọrụ ahụ qemu, wdg.
Ebumnuche nke qemu bụ inwe ike nwalee eriri buut sistemụ na-enweghị ibido kọmputa ahụ na eriri ejikọtara.
MultiSystem nọ n'ọrụ
Dịka ị pụrụ ịhụ, mmemme ahụ na-enye gị ohere igbanwe menu buut, dezie ebe nchekwa USB, budata ISO ndị a ma ama, wdg.
Nsonaazụ ikpeazụ, mgbe ịmalitegharị kọmputa na pendrive na ebe:
GRUB 2 menu tinyere distros niile arụnyere na pendrive
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Otu esi emepụta multiboot pendrive: nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu
Multiboot, ọ na-arụ ọrụ maka linux niile, ọ bụ ezie na ọ dị mfe ịme abụghị eserese ma ọ bụ KISS, ha zitere m njikọ Multisystem site na ubuntu gị site na ISO iji jiri Multisystem si virtualbox - Echere m na ọ ga-aga nke ọma Qemu.
Aịsaịa Gätjens M dijo
M jisiri ike itinye Ubuntu na Windows XP installer na otu pendrive, ọ bụ ezie na na mbụ mgbe booting na pendrive otu bụ obere ihe mgbagha na menu, ịgagharị a bit na ikpe na njehie otu onye na-eji na ya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma
Zaghachi Isaías Gätjens M
wget ahụghị faịlụ ibudata, ana m ahapụrụ gị ihe njikwa ịlaghachi
Edozi liveusb.info… 92.243.9.215
Ijikọ na liveusb.info | 92.243.9.215 |: 80… jikọọ.
E zigara arịrịọ HTTP, na-eche nzaghachi… 404 Not Found
2011-11-24 17:52:04 ERROR 404: Ahụghị.
Enweghị ebumnuche nke adịgboroja, Achọrọ m ikwugharị post nke m tinyere n'ọtụtụ saịtị, n'ihi na m na-ahụ na ndị mmadụ gbagwojuru anya na ngwa a dị mfe iji ma dị ike. Enweghị m ike ịghọta etu esi eji ya.
Nke mbụ, nke ahụ doro anya: Ọ B NEGH YOU NEB INR IN STBALLR Multi SBỌRS NSỌ NSỌ N'IME Gị.
M ga-anwa ichikota otu m si eme ya (sistemu ziri ezi maka distro ọ bụla, ọbụlagodi maka winbug $):
1 Ana m ebudata MultiSystem iso site na njikọ a:
2 M tinyere ya na penlive (A) na iwu dd, unetbootin, ihe ọ bụla masịrị gị.
Jiri pendrive nke opekata mpe 8 GB (M na-eji 16 GB, taa ha dị oke ọnụ), ka mkpịsị akwụkwọ buru ibu, ha ga-agbasasị agbasawanye ma nwekwuo ọ theyụ.
3 M malitere na MultiSystem penlive (A) site na pc, (m kwughachiri, opekata mpe 8 GB).
4 M tinye ihe ọzọ pendrive (B) nke ahaziri na abụba 32 (ọ bụ ezie na MultiSystem nwekwara ike ịhazi ya) na ihe mbụ m mere bụ ịwụnye MultiSystem iso na (B).
5 Ugbu a, site na mkpịsị A ma ọ bụ B ana m etinye isos nke distros site n'otu gaa na nke ọzọ.
Na njedebe, anyị enweghị otu, mana ọnụọgụ abụọ na-edekọ ọtụtụ ihe. Onye ọ bụla n'ime ha bụ n'aka onye na-eweta penlive generator, na-enwe MultiSystem iso na nke ọ bụla.
Ugbu a ị chọrọ naanị otu penlives, a disk ma ọ bụ pendrive na isos nke distros (ọ bụ ezie na ịba uru bụ ike ijikọ gị ibudata distros ọ ka mma na-ebu ha) na i nwere ike na-aga gburugburu eke penlive na onye ọ bụla 🙂
Ndepụta nke distros na-akwado bụ nnukwu:
N'ezie, ọ bụrụ na ụdị nke distro (Debian 7.5, Ubuntu 14, Mint 17) pụta, ị ga-ehichapụ nke ochie (Debian 7, Ubuntu 13, Mint 16) ma tinye nke ọhụrụ na pen.
Ndụmọdụ: Ejikọtala na otu penlive e kere na Multisystem GNU / Linux distros na winbug $ wụnye ndụ. Maka sistemụ arụmọrụ ọ bụla, penlive dị iche.
Ọ bụrụ na ị nwere ike itinye ngwa mmeri ọ bụla, dịka ọmụmaatụ antivirus (Kaspersky dị ndụ) na mkpịsị akwụkwọ nwere GNULinux distros, agbalịrị m nke ahụ ma ọ na-arụ ọrụ.
Ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ adịgide, nwalee pen-s ndị ọzọ nke ụdị na nha ndị ọzọ.
Nke a bụ ihe onye kere n'ụzọ nkịtị na Multisystem ga-agwa gị.
Agbalịrị m ibi ndụ ma tinye ọtụtụ disros na arụmọrụ a n'enweghị nsogbu.
Ejirila m ọnọdụ ikuku dị iche iche ejirila Multisystem rụọ ọrụ ọ bụghị ọtụtụ awa, mana izu ole na ole na pc na-enweghị diski diski, na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Atọ: ị nwere ike ịme otu n'ime ọgba aghara na-adịgide adịgide, mana ọ bụ naanị otu na penlive, na ọ bụrụ na anyị ahapụ ohere zuru oke maka ya (ana m akwado opekempe nke 1 GB, iji nwee ike imelite mmemme ma chekwaa faịlụ na distro ahụ).
Naanị ihe MultiSystem anaghị akwado na-emelite usoro ihe niile.
Eeh, inwere ike iwunye / wepu asusu na programmụ, gbakwunye ndọtị na ihe nchọgharị ahụ, chekwaa faịlị na oghere ahụ edebe maka distro na-adịgide, wdg. Ma anwala anwa inye gi ntughari obi ike ma obu pacman -Syu.
Atụrụ m anya na m kọwaara onwe m nke ọma.
Mana ana m emesi gị obi ike na m na-eji MultiSystem eme ogologo oge na enweghị nsogbu.
M na-atụ aro ndị editọ saịtị a ka ha mee isiokwu miri emi karị na ịba uru a otu oge, n'ihi na ọ kwesịrị ya.
Mgbe ị nwere ike ịgụ ọkwa a zuru ezu gbasara MultiSystem:
anyị na-enye dijo
n'ikpeazụ mmadụ na-akọwapụta ihe ọ bụla anyị kwesịrị ịma !!!!, na ọ nwere ike ịbụ naanị otu onye na-anọgidesi ike na nkwụsi ike maka mkpịsị aka ọ bụla, Ọ dịghị onye mere ka nke a doo anya, ọ bụ ya mere na enweghị m ike ịkwụsi ike na eriri m debian, n'ihi na ọ nweelarị ya Linux Linux mint 17. Aga m agbanwe ọrụ ndị ahụ, aga m ewepụ ịnọgidesi ike na linuxmint ma nye ya debian
Daalụ x 100000.
Ana m asị gị nnọọ! Obi ụtọ na ọ bara uru.
Ndewo, abịara m ruo ebe m chọrọ ịwụnye faịlụ igbu ahụ, mana ọ na-enye m njehie:
[sudo] paswọọdụ maka lilian:
sudo: ./install-depot-multiboot.sh: iwu ahụghị
bash: ./install-depot-multiboot.sh: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị adị
M gbalịrị sudo na mbụ ma na-enweghị ya, ọ naghị arụ ọrụ ọ bụla.
Enwere ike iduzi m biko? Daalụ
Idozi okuku mgbe itinye ngwa menu na Xfce